Warbaahinta danwaa Media Network » Shaqaaqadii Qardho oo Lugaha Lagashay Maamulka Xamar (War Culus)
Shaqaaqadii Qardho oo Lugaha Lagashay Maamulka Xamar (War Culus)
July 20, 2013 - Written by Maamulka - Edited byMaamulka Warbaahinta Danwaanews.com ayaa xog hoose ku heshay in shaqaaqadii iyo dilalkii kadhacay Magalada Qardho Bishan aanu kujiro iyo banjarintii geedi socodkii doorashooyinki Dowlada puntalnd ay kaalin wayn kaqaadatay kana danbaysay Maamulka Xamar ee Muqdisho fadhiya.
Sida ay kawada warqabaan Bulshada soomaliyeed waxaa wayadan danbe socday qorshe lagu doonayo in Dowlada Puntland kar karaka loo waydaaro waxaana qorshahaasi fulinaya oo maal galinaya Maamulka Xamar ee uu Hasan Shiekh Hogaamiyo.
Maamulka Xamar ayaa waxay u soo foofiyeen Gayiga Puntland ee ay nabada iyo dimuqraadiyadu kajrto Maleeshiyaad katirsan Xarakada Al-shabaab kadib wada hadal dhaxmaray Horjoogayaasha Al-shabaab ee beesha Hawiye iyo Maamulka Xamar.
Xarakada Al-shabaab ayaa u hayaantay Dhanka Puntland waxayna Halkaasi kafuliyeen dilal qorshaysan oo ay kula kaceen siyaasiyiin iyo culimo aw-diin ree puntland ah.
Xogtan ay Heshay Danwaanews.com ayaa sheegaya in ay jiraan Qorshe wayn oo ay Maamulka Xamar,iyo Somaliland kuwada Heshiiyeen kaas oo ah in kar karaarka Loowaydaaro Dowlada punland si aysan Marnaba u hirgalin Faderalka iyo waliba si aysan Marnaba u dhalanin Dowlad Kasoo jeeda Dhulka Puntland.
Qorashahan ayaa waxaa maal galinaya Xisbiga IRIRI ee uu hogaamiyo ismaaciil Cumar Geele waxayna ku balameen in qala laaso laga ogoo Gobalka puntalnd iyada oo ay u jeedadu tahay in aysan Marnaba dhalanin Dowlada Federal ah.
Dhanka kale siyaasada Xisbiga IRIR ee Kudhisan DHulbalaadhisiga ayaa waxa laf dhabar u ah gobalada lakala dhantaalayo Dowlada puntalnd oo iyadu Garab wayn siisay Dowlada Jubba-land.
Xogtan hoose oo aanu helay ayaa qeexaysa in ay wali socdaan shirar looga baraan dagayo sidii loo sii kicin lahaa rabshadaha kadhanka ah Puntland waxana qorshayaashaasi kamid ah in ay Soomaaliland Soo weerarto ciidamada Kugan Dhulka puntland iyada oo ku an dacoonaysa in ay Dhulka Soomaliland Doorashooyin Keenayaan.
Mamaulka Soomaliland ayaa xoog ku haysta Dhul kamid ah dhulka Dowlada Puntland kaas oo ay dad badan oo shacab ah ku xasuuqday.
Waxaana kamid ah Dhulka ay xooga ku hasato gobalada SSC .
Kashifkan ayaa waxa uu imanayaa iyada oo ay Dowlada Puntland ogaatay qorshaha lamaleegayo kana gaashamatay in ay qala laaso dhacaan sidaa aw-geedna joojisay doorashooyinkii dhici lahaa 15 bishan aanu kujiro.
Si kastaba ha haate waxaa si cad oo muuqata u soo if baxayo weerarka kadhanka ah Beesha Daarood ee ay wadaan Xisbiga IRIIR.
Last reply was 4 months ago	Ali	View
Wale waxsan maadan sheegin balaayo unbad kashekaysay ee waa bil ramadaane beenta ha la iska ilaaliyo
Irir oo gacan ku rimis ah haduu qorshaystay dhulboobka deegaanka qawmiyada Daarood waa inaynu xoraynaa laascaano iyo gobolka galgaduud oo ah gobol laga boobay sade daarood.walaalkaaga hurda xoolihiisa waa loo ilaaliyaa.ramadaan wanaagsan.
Reply	Nasra	View
Ilama ahan in ay waxans dhacaayan irir yaalo hadey imadan hata waxba kama qaadayan Daarood sidoodi umbaan raraneyna dameeraha.